नवौं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलमा एक दिने फिल्मी कार्यशाला हुँदै - दैनिक नेपाल न्युज
शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८ | Friday 7th May 2021
प्रकाशित द्वारा: शनिबार, बैशाख ४, २०७८
काठमाडौं, ४ बैशाख । ‘नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिवल–२०२१’ (नाफ २०२१) यही १० बैशाखदेखि १२ बैशाखसम्म आयोजना ह७३घढसने भएको छ । काठमाडौंको जमल स्थित सांस्कृतिक संस्थान नाचघरमा आयोजना हुने यो महोत्सब नवौं संस्करण हो । कपनको फैकामा रहेको कलेज अफ जर्नालिज्म एन्ड मास कम्यूनिकेशनको आयोजनामा यो महोत्सब हुदै आएको छ । यस महोत्सबमा नेपाल र अफ्रिकाको सिनेमा एवँम संस्कृतिको बारेमा एक दिने बहस हुने भएको छ । बहसमा नेपाल र अफ्रिकाबाट आएका सिनेकर्मीहरुले आफ्ना कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नेछन् ।
महोत्सब अध्यक्ष डा. मञ्ज७३घढस मि७नतसले नेपाल र अफ्रिकी महादिपलाई चलचित्रको माध्यमबाट सांस्कृतिक रुपमा जोड्ना र आपसी साँस्कृतिक आदन प्रदानका लागि बिगत नौ वर्षबाट यो महोत्सब आफ७३घढसहरुले आयोजना गर्दै आएको बताएकी छिन् । मि७नतसका अनुसार यो वर्ष कोभिडले पारेको नेपाली र अफ्रिकी सिनेमा बजारको प्रभावबारे पनि कार्यशालामा बहस हुनेछ । अफ्रिकी म७३घढसल७३घढसकका सिनेमा निर्माण शैली र नेपाली सिनेमा निर्माण सैली, नेपाली सिनेमामा सांस्कृतिक अबस्थालगायतका विषयमा पनि बहस ह७३घढसने भएको छ । महोत्सबको अन्तिम दिन १२ बैशाख विहान १०ः३० बजेबाट दिउँसो ३ बजेसम्म नेपाली र अफ्रिकन चलचित्रको बारे बहस हुने पनि अध्यक्ष मि७नतसले जानकारी गराएकी छिन् ।
गत डिसेम्बरमा हुनु पर्ने यो महोत्सब कोभिड १९ कै कारण बैशाखमा आयोजना गर्न लागिएको हो । नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलका निर्देशक डब्ब७३घढस क्षत्रीका अनुसार महोत्सबमा नेपालबाट ७ वटा चलचित्र चयन भएका छन् । जसमा एउटा बृत्तचित्र र बाँकी लघ७त्रगयतस चलचित्र रहेका छन् । नेपालबाट चयन भएका चलचित्रहरुमा निर्देशक गणेश पाण्डेको को हज्बेन्ड, निर्देशक हिमाल उप्रेतीको आमा, निर्देशक माधवराज खरेलको द७३घढसर्गामान्ड७३घढस, गणेशजँग रावलको सम्साया, सजल लोप्चनको गाईड, पुरुषोत्तम बस्नेतको सुरक्षा, निपिल शर्माको द फाईनल फेयर वेल र य७३घढसनिषराज उप्रेतीको बाटोमा रहेका छन् ।
नेपाल र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त भएका करिब ७ वटा चलचित्र मध्यबाट महोत्सबको चलचित्र निर्णायक सम७३घढसहले जम्मा १८ वटा लामा छोटा चलचित्र चयन गरेको छ । जसमा चलचित्र, लघ७त्रगयतस चलचित्र र बृत्तचित्र छन् । महोत्सबका बाँकी चलचित्रहरु अफ्रिकी म७३घढसल७३घढसकबाट चयन भएका हुन् । जसमा जिम्वावेबाट ग७३घढसड म्यान,थन्डिज् डायरी, इजिप्टबाट बबल्स्, ड्राई हट समर, एक्जिट र द स्पारो किड्स रहेका छन् । यस्तै निमिभिया/ब्राजिलबाट बडी गेम्स, स्विट्जरल्यान्ड र रुवान्डाबाट इम्फ७३घढसरा, तान्जानियाँ/चिनबाट तजारा र सेनेगलबाट गोल्डेन फिस चयन भएका छन् । महोत्सबमा चलचित्र प्रदर्शन, अफ्रिकी खाना महोत्सब, अफ्रिकी पहिरन प्रदर्शन,नेपाली र अफ्रिकी साँस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत हुने पनि बताईएको छ ।
चौतारा, २३ वैशाखः वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधानको ८४ वर्षका उमेरमा आज निधन भएको छ । छातीमा समस्या देखिएपछि वसुन्धरास्थित न्युरो अस्पताल काठमाडौँमा उपचाररत प्रधानको निधन भएको हो । [...]
शम्भुजित बास्कोटा र मन्जु थापाको स्वरमा ‘पार्यो माया जालैमा’ सार्वजनिक
काठमाडौं । लेजेन्ड सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटा र मन्जु थापाको स्वरमा रहेको गीत ‘पार्यो माया जालैमा…’ (गोर्खा भीएस दोलखा) सार्वजनिक भएको छ । शम्भुजितकै शब्द तथा सङ्गीत, नरेन्द्र वियोगीको एरेञ्ज र [...]
नेपाल सर्ट फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सरोज खनाल उत्कृष्ट निर्देशक
काठमाडौं, २० बैशाख । काठमाडौंमा हालै सम्पन्न नेपाल सर्ट फिल्म अवार्ड २०७७ बर्षमा अभिनेता सरोज खनालले उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेका छन् । अभिनेता सरोज खनालले पहिलो पटक निर्देशनमै यो अवार्ड [...]
संयोजक बसुन्धरा भूषालद्धारा कल्याकारी कोषलाई रकम हस्तानतरण
काठमाडौं । अभिनेत्री बसुन्धरा भूषाल नेपाली चलचित्र क्षत्रेका लागि प्रतिष्ठित नाम हो । उनी विगत पाँच दशकदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अनवरत रुपमा लागि रहेकी छन् । विशेषत संघ संस्थाको वृद्धि [...]
फेसन डिजाइनर अल्बर एल्बाजको कोभिडबाट मृत्यु
पेरिस, १३ बैशाख– फ्रान्सका सुप्रसिद्ध फेसन डिजाइनर अल्बर एल्बाजको कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट ५९ वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको छ । रिचमन्ट लक्जरी ग्रुपका अध्यक्ष जोनाथन रुपर्टले अल्बरको निधनको खबरले आफू समेत [...]
अमेरिकामा बुद्धवीर लामालाई एकल साँझमा १७ लाख नगद सहित सम्मान
काठमाडौँ । 'बुद्धवीर लामा दशौं गीतिमय साँझ २०२१’ अमेरिकामा आयोजना गरिएको छ । चर्चित गीतकार बुद्धवीर लामाको एकल गीतहरु प्रस्तुत भएको कार्यक्रम शनिबार साँझ 'नेपाली समय अनुसार आइतबार’ पेन्सिलभेनिया राज्यको [...]
गाउँले होटल साउजी जस्तै अर्का मासु ब्यबसायी मृ त फेला, घ टनास्थल पुग्दा नसोचेको दृश्य देखियो, सबै डराए (भिडियो सहित)
राजमार्गको जंगलमा यौ-न व्यापारः युवतीदेखि बिवाहित महिलासम्म (भिडियो सहित)
प्रहरी चौकीमा हमला गरी पाँच प्रहरी अधिकारीको हत्या
काठमाडौँ-बुटवलको भाडा ६ हजार !
मकैबारिमा सरितालाई नग्न अवस्थामा मृत भेटियो, गाउँलेले गरे आमामाथी नै शंका, सबैले घेरेपछि खुल्यो नसोचेको रहस्य (भिडियो सहित)
आमा र भिनाजु भेट्न आएको भोलि पल्ट मकैबारीमा श,व फेला, त्यो दिन आमाले यस्तो सम्म भनेको गोप्य खुलासा (भिडियो सहित)
आज मध्यरातिदेखि स्थगन हुँदै अन्तरराष्ट्रिय उडान
देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९०७० मा कोरोना सङ्क्रमण, ५४ को कोरोनाबाट मृत्यु
आमाले जागिर लगाईदिन्छु भनेर लगेको भोलि पल्ट छोरी मकैबारीमा मृत फेला, सम्झेर भक्कानो छोडेर रोइन दिदी (भिडियो सहित)
‘अक्सिजनका खाली सिलिण्डर अस्पताललाई उपलब्ध गराउनुहोस्’
आरोपप्रत्यारोप गर्ने बेला होइन, बाँच्ने र बचाउने बेला होः मन्त्री गुरुङ